China high rise steel commercial isakhiwo ifektri abakhiqizi | Honghua
Lezi zinhlelo zokwakha eziphakeme kakhulu, esizibize ngokuthi, zakhiwe ngohlaka lwesakhiwo sohlaka. Amafreyimu aboshiwe ayimigqa emile ekhanjiwe ukumelana nemithwalo ye-laterals ikakhulukazi amalungu e-diagonal ukuthi ngokuhlangana nababhinci, bakha i-web ye-truss mpo, amakholomu asebenze njengezinketho.
Iphrojekthi yePearl River New Town-
Indawo yokwakha: 440000㎡
IPearl River New Town West Tower, isakhiwo sezentengiselwano esinezinsimbi eziphakeme, iGuangzhou International Financial Center, savulwa ngo-Okthoba 15, 2010. Lesi sakhiwo singamamitha angama-432 ukuphakama futhi sinezitezi eziyi-103. Umbhoshongo osentshonalanga wawukhanyiswe ngokusemthethweni, oyingxenye iphrojekthi yokukhanyisa yemidlalo yase-Asia.
Ukuma kombhoshongo osentshonalanga kufana ne- "crystal esobala", futhi isakhiwo sisebenzisa uhlelo olusha lwe-rhomboid oluthambekele ekwakhiweni kweshubhu. Ishubhu lensimbi eligcwele ukhonkolo line-tube eyengeziwe ethambekele ku-grid, udonga oluqinisiwe lukakhonkolo lunethubhu elingaphakathi, futhi iphansi lensimbi elihlanganiswe ngensimbi lixhuma amashubhu angaphakathi nangaphandle. ukuqina okwanele kwe-lateral nokusebenza okuhle kakhulu kokuzamazama komhlaba. Uma kwenzeka izehlakalo ezingazelelwe ezinjengomthelela nokuqhuma, kuzolimala kancane, futhi ngeke kubangele ukusabela kokuwa nokuwa, ngakho-ke ukuphepha kwesakhiwo kuphezulu. Ukuhlolwa kukhombisile ukuthi umbhoshongo ungamelana ne-octave ye-rare ukuzamazama komhlaba (umfutho wokuqiniswa kokuzamazama komhlaba eGuangzhou kungama-degree ayisikhombisa), esenzweni somoya sangekhulu-elilodwa, abantu abasembhoshongweni ngeke bazizwe bengakhululekile.Lolu hlobo lohlelo lwesakhiwo yilona kuphela olusetshenzisiwe emhlabeni.
Lezi zinhlelo zokwakha eziphakeme kakhulu, esizibize ngokuthi, zakhiwe ngohlaka lwesakhiwo sohlaka. Amafreyimu aboshelwe angamathambo amile ahlukaniswe ngama-cantilevered amelana nemithwalo ye-laterals ikakhulukazi amalungu e-diagonal ukuthi kanye nababhinci, bakha i-web ye-truss mpo, amakholomu asebenze njengezinketho. Amalungu we-Bracing aqeda ukugoba emishayweni nasezinsikeni. Amafreyimu wensimbi, imishayo yensimbi nezinsika zensimbi konke kwenziwa yimboni yethu.
Isetshenziselwa ukwakhiwa kwensimbi
Lolu hlelo lufanelekile esakhiweni esinezitezi eziningi ebangeni eliphansi ukuya phakathi kokuphakama.
esebenza kahle futhi eyonga ukomeleza ukuqina kwe-lateral nokumelana nohlaka lohlaka oluqinile.
Lolu hlelo luvumela ukusetshenziswa kwamalungu amancane esakhiweni.
Inzuzo evelele yohlaka oluboshelwe ukuthi, kungaphindaphinda ukuphakama kwesakhiwo ngomnotho osobala ekwakhiweni nasekuqambeni.
Kodwa-ke, kungaphazamisa ukuhlelwa kwangaphakathi nendawo yeminyango namawindi. Kungakho izofakwa ngaphakathi kanye nolayini bezindonga nokwahlukanisa.
Langaphambilini Ifulethi lensimbi eliphakeme